Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Mey 2019 à 09:41
Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Mey 2019 à 09:13 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Mey 2019 à 09:41 (hanova) (esory)
Ny [[Epistily ho an'ny Kolosiana]] na [[Epistily ho an'ny Kolosiana|Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Kôlôsianina]] dia boky hita ao amin'ny [[Baiboly]], ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]] izay isan'ny atao hoe [[epistily]]. Taratasy nalefan'ny Apostoly [[Paoly (apostoly)|Paoly]] ho an'ny fiangonana kristiana tany [[Kolosia]] izany. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 63 no nanoratana azy.
Mampitandrina mialoha ny Kristiana ao Kolosia i Paoly mba tsy ho voataonan’ny fampianarana mifanohitra amin’ny fampianaran'i Kristy. Izany fampianarana tsy izy izany dia manankina ny famonjena amin’ny fahalalana izay fantatra taty aoriana amin'ny anarana hoe [[gnostisisma]]. Ny Fiangonana dia vatan’i Kristy, hoy i Paoly (Kol. 1.15-20). Ampahatsiahivin’ny Paoly ny fototra iorenan’ny vaovaoVaovao mahafalyMahafaly na Filazantsara. Izany fampianara-diso izany dia ny fampianaran’ny filozofa (Kol. 2.8) izay mampifangaro finoana isan-karazany amin’ny [[fivavahana jiosy]] (toy ny fivavahana amin’ny [[anjely]] sy ny tsy maintsy hanatanterahana famoràna) izay miendrika fampijalian-tena hahazoana famonjena (Kol. 2.20-23).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/970741"